C/casiis Lafta-gareen oo lagu cadaadinayo inuu ka qeyb galo Shirka uu RW Rooble ku baaqay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. C/casiis Lafta-gareen oo lagu cadaadinayo inuu ka qeyb galo Shirka uu RW Rooble ku baaqay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed C/casiis Maxamed Xasan (Lafta-gareen) ayaa cadaadis lagu saaray inuu ka qeyb galo shirka Golaha Wadatashiga ee uu ku baaqay Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Xiriirka Rooble iyo Lafta-gareen ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyay markii xukuumadda Rooble ay soo furtay Kiiska Sheekh Mukhtaar Roobow oo si weyn uga careysiiyay madaxweynaha K/Galbeed iyo madaxda maamulkaasi.
Previous articleAlshabaab oo ka baxday Balcad iyo Ciidamada Dowladda oo shaaciyey inay ku laayeen Alshabaab…
Next articleTaliyaha Booliska oo Saraakiisha gaarsiiyey Digniin ah inaysan Siyaasadda ku milmin